Neymar oo qarka u saaran inuu saxiixo heshiis cusub oo Paris Saint-Germain ah
Home Horyaalka France Neymar oo qarka u saaran inuu saxiixo heshiis cusub oo Paris Saint-Germain...
Paris Saint-Germain ayaa heshiis la gaartay weeraryahanka weyn ee Neymar heshiiska shaqsiga ah ee qandaraaska cusub ee shanta sano ah, sida lagu sheegay warbixin.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil, oo noqday ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka markii uu PSG kaga soo biiray Barcelona 198m bishii Ogosto 2017, wuxuu heystaa 16 bilood oo qandaraaskiisa haatan ah.
Si kastaba ha ahaatee, Neymar ayaa dhawaan sheegay inuu ku dhow yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda ka dhisan garoonka Parc des Princes, taasoo soo afjari doonta hadal heyn kasta oo ku habsatay oo ku saabsan ku laabashada Barca.
Qatar Today ayaa werisay in 29-jirkan uu hadda qarka u saaran yahay inuu qalinka ku duugo heshiisyo cusub oo xiraya illaa 2026.
Weeraryahanka kale ee Kylian Mbappe, oo dhaliyay seddexleey kulankii Talaadadii 4-1 ay kaga badiyeen Barcelona, ​​ayaa sidoo kale wadahadalo kula jira kooxda reer France si loo kordhiyo qandaraaskiisa wixii ka dambeeya 2021-22.
Previous articleManchester United oo diyaarineysa 61m si ay Real Madrid kaga adkaato Jules Kounde
Next articleKooxda Sevilla oo xiiseyneysa xidiga Liverpool Takumi Minamino.